စီရော်နယ်ဒို ရောက်ခါစကလို မန်ယူမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တချို့ကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ပြောပြီ – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက် အသင်းဟာ ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အတူ နိုင်ပွဲတွေဆက်နေခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ EFL Cup မှာ ဆို အဲဗာတန် အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ 0-2 ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်…
ယင်းပွဲမှာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက် အသင်းကွင်းလယ်ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့ မာတစ်တို့ ကွင်းထဲ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စ ဟာ YouTube မှာ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်….
ဖြစ်စဉ်မှာ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်ရဲ့ အမှားကို မာတစ်က ဘရူနိုဖာနန်ဒက်အား ပခုံးကို ဆောင့်တွန်းလိုက်ခဲ့ပါတယ်….ယင်းဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဟာ Sport Tribble မှာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်…
ဘရူနိဖာနန်ဒက် က ” ကျနော်တို့ အဲ့ဒီနေ့ က ဖြစ်ရပ်ဟာ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်လွန်းခဲ့ပါတယ်…..မာတစ်ဟာ ကျနော့်ကို ပခုံးကိုဆောင့်တွန်းခဲ့ပါတယ်…..ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်ပရိသတ်တွေစိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာသိပါတယ်…..
မန်ချက်စတာယူနိက်အသင်းမှာ ရှိတဲ့ ကစားသမားတော်တော်များများ နဲ့ ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတချို့ ရှိပါတယ်…ဒါပေမဲ့ မာတစ်အနေနဲ့ ကျနော့်ကို ပခုံးကိုဘာကြောင့်တွန်းလိုက်တာလဲဆိုတဲ့အပေါ် ကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး…..
သူ့နိုင်လိုစိတ်နဲ့ အသင်းအတွက်လို့ ကျနော်မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်….ဒါပေမဲ့ ပေါ်တူဂီသားဖြစ်တဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ အသင်းမှာ စီရော်နယ်ဒို ရောက်ခါစတုန်းကလို ဘဲ စနောက်ခံရတာတွေ လှောင်ပြောင်တာတချို့တော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်…..” ဟုပြောသွားခဲ့ပါတယ်….
ဘရူနိုကို စနောက်တဲ့သတင်းတွေကတော့ ထွက်လည်းထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်….ဘရူနိုကိုယ်တိုင်ကလည်း အကောင်းမြင်သမားမို့ သူ့ကိုနှောက်ပြောင်နေတဲ့လူတွေကို တော့ ထုတ်ဖော်ပြောချင်းမရှိပါဘူး……သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းကိုလည်း ထိခိုက်မှာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်..